JAILBILBY macno ma u sameynayaa Apple Watch? | Wararka IPhone
El Apple Watch Waxay dhawaan noqon doontaa curcurka malaayiin dad ah, qabsashadeeda waxay umuuqataa mid sifiican loo soo dhoweeyay oo aad uga fog wixii markii hore loo maleeyay, waxaa jira kuwa badan oo bilaabay jiilkan ugu horeeya ee Apple's smart watch.
Weli waan xasuustaa markii iphone-kii uguhoreeyay la bilaabay, terminal kacaan ku sameeyay warshadaha laakiin aad u xaddidanaa dhanka fursadaha. Tani waa sida JAILBREAK, hab lagu helo kartida dhabta ah mobilkaas oo barnaamijyadi aan wali la rakibikarin maadama App Store uusan jirin.
Apple Watch waxay leedahay nidaam cusub oo hawl socodsiineed layaabna ma noqonayso haddii bulshada JAILBREAK ay isku dayaan inay raadiyaan godad si ay ugu soo galaan calooshooda. Maxaan rabnaa JAILBREAK on Apple Watch? Asal ahaan isla wixii aan ugu isticmaalno iPhone-ka, taasi waa, si aan ugu raaxeysanno astaamaha uusan Apple u hirgelin sida caadiga ah.
Sida inbadan oo idinka mid ahi horey u ogaayeen, Apple Watch waxay leedahay deked baaritaan looguma talagalin inay isticmaalaan dadka isticmaala dhamaadka. In kasta oo aan la garanayn waxtarka dhabta ah ee isku xirahaas, haddana waa hubaal aalad baaris oo loogu talagalay Apple iyo hab lagu awoodo in xoog lagu soo celiyo saacadda haddii ay jirto wax dhibaato ah. Markaan arkeyno, waxaan shaki kujirin in dekeddani ay sidoo kale noqon karto wadada ugu horeysa ee JAILBILAAD ugu horeysa ay kubilaabmi karto horumar.
Beddel is-dhexgalka Apple Watch, jooji xulashooyinka qaarkood ee aanan isticmaaleynin, rakib khaladaadka, u fur fursadaha cusub barnaamijyada qaarkood ... Kuwani waa qaar tusaalooyinka waxa imaatinka Cydia ee smartwatch macnaheedu noqon karo.
Sida iska cad, waxay hadleysaa waqti kahor laakiin aniga ahaan, waxaan hubaa in jabsadayaal badan ay shaqo tagi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan ee ay awoodaan laalaadda biladda ah inaad noqonayso qofkii ugu horreeyay ee jeelka ka joojiya Apple Watch Sideyse noqon kartaa haddii kale, waan kula soo socodsiin doonaa isla marka ay taasi dhacdo.
Aragtidaada Apple Watch wax ma iska beddeli doontaa haddii bulshada JAILBILA loo oggolaado in ay wax badan ka helaan iyada oo aan soo aragnay taariikhda?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » JAILBILBY macno ma u sameynayaa Apple Watch?
Dekedda aad ka hadleyso ayaa ku qarsoon moodooyinka iibka ah. Sidoo kale, jebinta iPhone waxay noqon laheyd wax kabadan inta kufilan. Ma jecli inaan ku qiyaaso Apple Watch oo xanniban waxna ma qaban karaan si ay u hagaajiyaan
Saacadda Apple lafteeda wax macno ah ma samaynayso, Eye I have Iphone 6 plus ✌
Jawaab Gadiel Santos
Haddii aad haysato, mararka qaarkood waa inaad ka soo saarta iPhone-ka jeebkaaga si aad u aragto ogeysiisyada oo saacadana ay aad ugu fududaanayso.
Jawaab Sebastián Ignoti
JAILBILAASH maahan mid loo baahan yahay daawashada tufaaxa, kaliya wuxuu fuliyaa shaqooyinka qaarkood
Jailbreak macnaheedu waa in koodh aan la saxeexin lagu rakibayo tufaax qalabkaaga. Saacadda tufaaxa illaa iyo hadda, waxay awoodi doontaa inay soo saarto kordhin lagu abuuray Codsigaaga oo leh xCode iyadoo la adeegsanayo xirmada saacadda Apple. Qalabka loo yaqaan 'Watch Kit' wuxuu ka kooban yahay API-yada la diiwaangeliyey iyo API-yada aan sharciga lahayn, taas oo ah, API-yada guud ee loogu talagalay horumariyeyaasha iyo API-yada gaarka loo leeyahay ee tufaaxa, eeg tusaalaha codka API, wuxuu ahaa API gaar ah illaa la sii daayo nooca ugu dambeeya ee xCode.
Marka saacadda tufaaxa, hadda maahan inuu lahaado ama uusan haysan JAILBREAK, laakiin waxay noqon doontaa iPhone-kaaga oo ay tahay inuu haysto si uu awood ugu yeesho kordhinta saacadda tufaaxa, maadaama uusan ku jiri doonin codsiyo kaligiis, laakiin tixraacyada nambarka ku qoran arjigaaga.
Nooca mustaqbalka, halka saacadda Apple ay awood u leedahay inay kaligeed codsiyo ku shaqeyso, Jailbreak ayaa macno samayn doonta, maadaama ay u oggolaanayso rakibidda lambar uusan Apple saxiixin.
Ku jawaab shwk
Haddii saacaddu aysan macno samaynayn, qiyaasi qashin-qubka
Wow, jiilkani waa caajis oo xitaa way adag tahay in qolka jeebkaaga laga soo saaro 😱
saacadda tufaaxa miyey macno samaynaysaa ??
Jawaab Daniel CB
Hagaag, hadii ay banaanka keenaan, wey ku farxi lahaayeen, malaha waxay cayaaraha ku ridi karaan Apple wacth hahaha, markaan iibsan karo Apple wacth ee Spain waan iibsadaa waxay noqon laheyd mida caadiga ah. 🙂
Fleksy, mid ka mid ah teebabka beddelka ugu fiican, ayaa bilaash ah toddobaadkan
Adventures of Dino, waa ciyaar ay caruurtu wax ku bartaan iyagoo baashaalaya